မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....: လိမ္မော်သီးစားသူများ
Posted by ညိမ်းနိုင် at 1/22/2012
ဟမ်.............ရက်စက်လိုက်ကြဒါ ရက်စက်လိုက်ကြဒါ ))))))))
လွမ်းလွန်းလို့စားလာဒါတွေပြရရင် မလာခင်က ၃ ရစ် ခု ၄ ရစ် မှတ်ပလား ..
လည်ပင်းသာတက်နင်းဒယ်လို့ဘဲ ပြောရင်းနဲ့ ရှုးရှုးထွက်မတတ်ကို ရီတွားဒယ်အေး)
တိုက်ဆိုင်သူ ၄ ရစ် ခေါ် မော်ဒယ်ဗိုက်ပူ
သူထီးနှင့် သူမ တို့ကိုမျှ ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ----
မှန်သပ ကိုကြီးငြိမ်းနိုင်ရာ ...၁၆နဲ့ လျှိုထား စမ်းပါ ဒီတစ်ခါ အချိုးကောင်းတယ် ဒိုင်သေပြီး တစ်ရွာလုံးစားရမှာပါဗျ..ဟိတ် ကုလားရှောင် အောင်ပြီ ..ဟိုက် ဘောင်တန်းနေပြီ..မဲကနဲ့ရဲကနဲ ..ကုလားကွ..သေပီဆရာ..၀မ်းမရှိတင်တဲ့..ဒိုင်ကပြောတယ်..နှစ်ကူးအဲ့လို အဲ့လို
ကိုရင့်အတွက် သာဓုခေါ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ :P
ကိုရင်ရဲ့ အလှူသုံးခုထဲက နောက်ဆုံးအလှူကို ကမောင်လေးနဲ့ စပ်တူလုပ်ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လိမ်မော်သီး စားသူများ ဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်တောင် သွားကျိန်းသွားသလိုလုိုဘဲ။ ပါးစပ်မပိတ်ဘဲ ဖတ်နေမိလို့။ အရေးအသားတော်ချက်။
၀ါးလုံးကွဲရယ်လိုက်ရတယ် အစ်ကိုရေး)
လူတွေကို ရယ်အောင် ရေးနိုင်တာ နည်းတဲ့အစွမ်းလား ကိုရင်ညိမ်းနိုင်ရ..
ဖတ်ရတာ သွားကြိမ်းလိုက်တာနော်.... ဟီး ဟီး ဟီး
ကိုညိမ်းနိုင်ရဲ့ အရေးအသား ညက်ညောပုံကတော့ မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်အောင်ပဲဗျို့၊ တော်တယ်ဗျာ..၊ ရယ်စရာတွေကို အတည်ပေါက်နဲ့ ရေးနိုင်တာ နည်းတဲ့ အရည်အချင်းလားဗျာ..၊ မဒမ်သာဝ ကနေ နောက်ပိုင်းမှာ ဘာ့ကြောင့် မဒမ်ဝ ဆိုပြီး ပြောင်းရေးရသလဲ လို့ စောကြောနေတာဗျ၊ စာလုံး အကျအပေါက် များလားပေါ့လေ၊ နောက်မှ အလွမ်းတွေနဲ့ နွယ်နေတာ တွေ့ရတော့သကိုး..၊း)
ဤရက်ပတ်အတွင်း ကိုရင်တို့အိမ်တွင်းမှ ဗြုန်းဗြုန်းဒိုင်းဒိုင်း အသံကြီးများ ထွက်ပေါ်လာပါက ကငြိမ်းနိုင် ကောင်းမှုဖြင့် ကိုရင့်အကြောင်းကို သိသွားသော မဒိုးကန်မှ ကိုရင့်ကျောပြင်ကို ဗြောတင်ရာမှ ထွက်လာသော အသံသာဖြစ်ပြီး တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ဗြောက်အိုးဖောက်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံများမဟုတ်ဟု မှတ်ကြမည် ဟူလို...
အော်... ဒါက ဒီလိုကြောင့်ကိုး... ဟီးဟီးဟီး :P
မမမဒမ်ရေ..မခံနဲ့ အဲဒါ အကိုညိမ်းနိုင် သက်သက် အကြံပေးတာပါဗျို့...:):)
ဟ ဟ ကညိမ်းတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ရီရယ်....နောက်ဆုံးပြန်ဖြေ(ဖြည်)ထားတာလေးကိုလဲ သဘောကျပါတယ်...ခေါင်းစဉ်ပေးတာကိုပြောတာ..။
အကိုအိကု . . . နပ်နပ်တို့ကတော့ ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး သွားမကျိမ်းပဲ ခေါင်းကျိမ်းတယ် ခေါင်းကျိမ်းနေတယ်နော် ။ မြင်ရသမျှ . . . ဒီ ငနပ် တစ်ကောင် တွေ့ရင် နုတ်နုတ်စင်း ပါးပါးလှီး တောက်တောက်ကြော် လုပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး ဂျီတော့ စတေးတပ်မှာ ခေါင်းစဉ်အကြီးကြီး တင်ပြီးသကာလ နှာခေါင်းက အငွေ့ တစ်ထောင်း ထောင်း ထွက်အောင် နှုတ်ခမ်းမွေးကြီး ကားနေအောင် ထောင်ပြီး ကျိမ်းတော်မူနေသတဲ့ဗျာ . . . ကိုယ့်ခမျာ မဒမ်ဝ မျက်စောင်းက လွတ်အောင် ဂျီတော့ မတက်ရဲရှာပဲ 0ffline အားကိုးနဲ့ စတေးရှောင်တော် မူနေရတာ တွင်းအောင်းနေတဲ့ မြွှေတောင် ရှုံးလောက်တယ် . . အော် လိမ္မော်သီးစားသူများရယ် . . . လိမ္မော်သီးစားသူများပါပေတကားးး))))))
နတ်ဆိုးကြီး ဗညားရှိန် ( လင်းခေတ်ဒီနို )
:D ဒီဇာတ်လမ်း အတော်ဟစ်ဖြစ်နေတာကိုး... ရီလိုက်ရတာ အတောမသတ်.. :D
ကောင်းလေစွ။ လူပျိုကြီးဆိုတော့ တူများဇနီးမောင်နှံကို နာလိုဘူးနဲ့ တူပါတယ်ဂျာ...:D..
အမှန်က ကိုရင်ညံ့တာ..လိမ္မော်သီး မကျွေးဘဲ ၀က်ဆီဖက်တွေချည်းကျွေးရမှာ..ဟီးဟီး(သန်လျင်သား)
ဖတ်ပြီး ရယ်သွားတယ် ..ဟိဟိ
အကိုပြောပြမှ မဒမ်ဝ ကိုရင့်အလုပ်ကိုဘာကြောင့်လိုက်ရတာကို သိရတယ်။
နောက်များဆို အတုယူဖို့လိုမယ် မဟုတ်လား။
အတည်ပေါက်နဲ့ရေးတဲ့ ဟာသ တော်တော်လေး ရသ မြောက်လှတယ်ဗျာ။
ဒီနည်းလမ်းသာ Researcher တွေ သိရင်တော့